Haintrano teny Tanjombato: olona iray namoy ny ainy sempotry ny afo | NewsMada
Haintrano teny Tanjombato: olona iray namoy ny ainy sempotry ny afo
Omaly maraina vao maty ny afo tamin’ilay firehetana orinasa afakaba teny Tanjombato, afakomaly alina. Namoy ny ainy, vokatr’izany, ny teratany vahiny iray lehiben’ny mpiambina ao amin’ny orinasa…
Afakomaly alina tamin’ny 8 ora no nitranga ny firehetana niainga avy ao amin’ny toerana fanamainana lamba ao amin’ilay orinasa afakaba. Nijoalajoala tsy nisy toy izany ny afo ka nahazo ny ampahany tamin’ilay orinasa. Araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ireo mpiasa eny an-toerana, namoy ny ainy vokatry ny fahasemporana tamin’ny haintrano ny teratany vahiny iray lehiben’ny mpiambina ao amin’ity orinasa ity. Fantatra fa isan’ireo orinasa manana mpiasa betsaka mpanamboatra lamba sy akanjo eny Tanjombato ity nirehitra ity raha ny fitantaran’ireo mpiasa hatrany. Vokany, tsy niasa ny mpiasa, omaly, nalefa nody. Manahy, araka izany, ireo mpiasa sasany fa mety ho tonga hatrany amin’ny fampiatoana vonjimaika ireo mpiasa amin’ny asany ny fahavoazana nihatra tamin’ity orinasa afakaba ity. Isan’ny nampanano sarotra ny famonoana ny afo ny tsy fisian’ny fantson-drano ahafahana mamono ny afo raha sendra loza toy izao.
Nohamafisin’ny tompon’andraikitra misahana ny fampiofanana eo anivon’ny mpamonjy voina kosa, ny officier, Ralimbison Yves fa kitay nampirehetina tao amin’ny toerana fanamainana lamba no nitarika ny haintrano. “Ny tsy hitaran’ny afo no tena nataonay voalohany indrindra”, hoy izy.
Nambarany hatrany fa trano 30 ka hatramin’ny 40 tafo eo no may, nandritra ny roa volana izay. Roa isan-kerinandro ny trano mirehitra. Tsy fitandremana no mahatonga ny loza ary eny amin’ny faritra iva no matetika nahitana izany trangana haintrano izany satria tranohazo avokoa ny ankamaroan’ny trano amin’iny faritra iny.